Kooxda Macaawisleeyda oo weerar culus ku qaaday Al-shabaab – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kooxda Macaawisleeyda oo weerar culus ku qaaday Al-shabaab
Dagalkaas ayaa waxaa Kooxda la magac baxday Macawiisleyda iyo ururka Al-Shabaab waxa uu xalay ku dhexmaray deegaano koostaga degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Rag hubeysan oo ka tirsan Kooxda Macawiisleyda ay weerareen Saldhig Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Masaajid Cali Gaduud,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal mudo socday oo dhaliyey khasaaro laba dhinac ah.
Maleeshiyada Macawiisley ayaa ah Shacab is aruusaday, kuwaas oo sheegay inay u dul qaadan waayeen dhibaatooyin ay kala kulmeen Al-Shabaab, waxaana ay inta badan Al-Shabaab kula dagaalameen deegaano ka tirsan Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Dagaalkii xalay waxaa Kooxda la magac baxday Macawiisleyda iyo ururka Al-Shabaab ku dhexmaray degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe weli dhankooda kama hadlin Ururka Al-Shabaab.
Previous articleShirkado hakiyey isticmaalka diyaardda Boeing 737-Max 8
Next article5 Calaamadood Oo Lagu Ogaado Khiyaanada Guurka
Warbixintii ugu danbeysa COVID19 ee somaliland
Xildhibaan Fiqi oo ka hadley socdaalkii farmaajo iyo dabaal...